COVID-19 Treatment ဘယ်လိုကုသမလဲ
အဖြေထွက်ပြီ ကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီဆရာ အောက်စီဂျင် တိုင်းနေသင့်။ နည်းရင်တော့ ဆေးရုံတက်ရ။ ၈၀% ဆေးရုံတက်ရန်မလိုကြ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ညနေကြ (ကျ) ရင်တော့ကွာရန်တင်းဝင်ရမယ် သူတို့လာခေါ်မယ်ပြောပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါအတွက် ဆေးကုသနည်း ဆေးသုတေသနတွေ တကမ္ဘာလုံးမှာလုပ်နေတယ်။ ပိုပြီး ကောင်းလာတယ်။ အရင်နည်းတချို့ကို မသုံးတော့ပါ၊ ဥပမာ အေမရိကန် အရင်သမတက ငှက်ဖျားဆေး။ ၉-၁၀-၂၀၂ဝနေ့ထွက် ဆေးနည်း တချို့ရှိတယ်။ • Remdesivir ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး။ • Dexamethasone ခေါ် ကော်တီကိုစတီရွိုက်ဆေး။ • Monoclonal antibodies အင်တီဘော်ဒီဆေး။ တခြားကုသနည်းတွေ • Convalescent Plasma ပလာစမာ သွင်းပေးနည်း။ • Mesenchymal Stem Cells စတမ်ဆဲလ် ကုသနည်း။ 1. အိမ်မှာသာ နေထိုင်ပါ။ 2. တဦးတည်း တခန်းထဲမှာသာ နေပါ။ 3. တခြားလူတွေနဲ့ ထိစပ်မှု မလုပ်ပါနဲ့။ 4. စားလိုတာ အကုန်စားသောက်ပါ။ 5. စိတ်ကို အပြုသဘောဆောင်ပါ။ • စစ်လို့ (+) ပြသူတွေ နောက် ၁၀ ရက်အထိသာကူးစက်နိုင်တယ်။ • နောက်ခုက သာမန်လက္ခဏာစတင်ခံစားရပြီးနောက် ၁၀ ရက်။ • နောက်တခုက ဆိုးတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတင်ခံစားရပြီးနောက် ၂၀ ရက်။ • နောက်တခုက လက္ခဏာပျောက်ပြီးနောက် ၁၀ ရက်။ • လေ့လာမှုတခုက ၉ ရက်ဆိုပါတယ်။ ကူးစက်ခံရသူ ၈